Dzidza Chirungu kana chiFrench muCanada - BLI Chikoro chemutauro muCanada
TEF Canada uye TEFAQ
Uri Bilingual?Verenga Chirungu kana chiFrench
Dzidzira Chirungu kana chiFrench muCanada uye uve chikamu chemhuri yeBLI.
Isu takabatsira zviuru zvevadzidzi kudzidza Chirungu neFrench muCanada.
Dzidza Chirungu kana chiFrench muCanadaBhuka izvozvi - Dzidza gare gare
Kana iwe wakagara uchirota nezvekudzidza kunze kwenyika, ino inguva yakakodzera yekuzviita.
BLI Canada iri kupa zvinoshamisa zvaderedzwa zvaunogona kushandisa mukana nazvo
kana iwe uchida kudzidza Chirungu kana chiFrench muCanada!
Bhuka kosi yako izvozvi uye tanga mune ramangwana zuva, apo zvese zvadzoka kune zvakajairwa.
Unoda kudzidza kubva mukunyaradza kweimba yako?Chirungu neFrench Online zvidzidzo
Zvirongwa zvese zviripo
Dzidza Chirungu kana ChiFrench muCanada kunyangwe iwe usingakwanise kuve pano.
Tora chiChirungu kana chiFrench online makosi nevadzidzi vedu vekuCanada
mukirasi yepamhepo yemarudzi mazhinji uye nekuvandudza ako ruzivo rwe mutauro.
Unogona kusarudza kubva pane zviviri zvatinosarudza:
Tanga kudzidza Chirungu kana chiFrench online uye wapedza chirongwa chako muCanada
kana ingoenda nesarudzo yepamhepo.
Tsvaga yako yeChirungu ChikamuFree
Pamwe kana iwe uchida kudzidza Chirungu muCanada asi iwe hauzive kuti zvichakutora nguva yakareba sei
kudzidza kana kuverenga mutauro, kana kana uchingoda kuziva nezvechirungu chako,
Iwe unogona kutora yedu yeChirungu yemhando yepamusoro bvunzo uye uwane nhasi.
Tora bvunzo yezinga
Iwe unoda kuziva kuti mwero wako wechiFrench chii?Free
Ziva kuti mwero wako wechiFrench nderipi nekutora bvunzo dzePahara.
Pamwe kana iwe uchida kudzidza chiFrench muCanada asi iwe hauzive kuti zvichakutora nguva yakareba sei
kudzidza kana kuverenga mutauro, kana kana uchingoda kuziva nezvezera rako reFrance,
Iwe unogona kutora yedu Free French level bvunzo uye uzive nhasi.
Chirungu neFrench Online KudzidzaDzidza Chirungu kana chiFrench ONLINE
Nyoresa nhasi uye
bvisa makumi mashanu muzana
Dzidza Chirungu kana chiFrench kubva kunyaradzo yeimba yako. Kana iwe wakakanganiswa nemamiriro azvino epasirese, unogona kutanga chirongwa chako kumba uye kuchipedzisa muCanada kana zvese zvadzokera kune zvakajairwa.
Kana iwe usina chero hurongwa hwekuuya kuCanada mune ramangwana, iwe unogona kubatsirwa nazvo futi.
Online KudzidzaZVIRI MITSAI
Mitauro Zvikoro muCanadaDzidza Chirungu kana chiFrench muCanada
Kana iwe uri kutsvaga chikoro chakanakisa kuti udzidze Chirungu kana chiFrench muCanada, iwe uri munzvimbo chaipo.
BLI Canada ine chirongwa chauri kutsvaga. Isu tinopa kosi dzeChirungu neFrench muMontreal neQuebec City kune wese munhu. Hazvina mhosva kuti chinangwa chako chii, kuBLI isu tinokubatsira iwe kuti uzadzise.
BLI inovimbisa kuti iwe uchawana izvo zvauri kutsvaga. Isu tinokubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvisinei nezvinangwa zvako. Kunyangwe chako chinangwa chiri chekudzidza Chirungu kana chiFrench kune zvakajairika, zvedzidzo, bhizinesi, kana bvunzo zvinangwa, isu tinokubatsira iwe kuti usvike ipapo.
Isu tine dzakasiyana-siyana makosi emakosi ese akasiyana modalities. Kunyangwe iwe uri wekutanga kana mudzidzi wepamberi uyo anoda kukwana iwe hunyanzvi hwemitauro mune imwe nharaunda nzvimbo, vadzidzisi vedu vanozokutsigira kuburikidza iyi yekudzidzira yemitambo.
Isu tine chirongwa chakakodzera kwauriSarudzo dzeChirongwa
Chirungu Makosi muMontreal kana Online. Funda chiRungu uye nekudziridza hunyanzvi huna hwemutauro mukuru: kutaura, kuverenga, kuteerera nekunyora nekushandiswa kwakaringana kwezvakarukwa zvegirama, magariro, uye magirafoni.
French makosi muMontreal, Quebec City kana Online. Zvishongedze kuti utaure nenzira yekuzvimirira uye yechisikigo uye dzidza matauriro ako pfungwa nemazano nekutsetsenura nekururama mumamiriro akasiyana.
Mutauro WEMAHARA KWEMAHARA
Dzidza Chirungu kana French Online. BLI Pamakirasi epamhepo anodzidziswa kurarama nevadzidzisi vedu venguva dzose, vachitarisana nehunyanzvi hwekutaurirana. Makirasi anotambirwa pane yedu yekudzidzisa chikuva.
Yedu yekugadzirira IELTS kosi inokupa iwe sumo kune chimiro cheiyo IELTS bvunzo pamwe
BLI TEFaQ yekugadzirira kosi inotarisana nekukubatsira iwe kuvandudza hunyanzvi hwaunoda kuti ubudirire pamiromo yemuromo uye yekuteerera yeTEFaQ bvunzo.
BLI Bhizinesi Chirungu chirongwa chinodzidzisa iwe basa rinotungamirwa kwehunyanzvi. Pakupera kwechirongwa
BLI Bhizinesi reFrance chirongwa chinokudzidzisa hunyanzvi-hwakatarisana nehunyanzvi. Pakupera kwechirongwa
Kana iwe usina nguva yekuzvipira kuzere kuronga nguva unogona kunyoresa kune imwe yeChirungu neyechiFrench Course ayo anopihwa manheru uye wotanga kuvandudza ako emitauro kugona nhasi.
BLI Bilingual chirongwa chinokupa iwe mukana wekudzidza, kuongorora uye kudzidzira zvese zvikamu zvekudzidza mutauro, kufukidza zvese zvina
Vhiki vhiki makosi
Yedu vhiki yehurongwa yakarongedzwa yakagadzirirwa kukodzera hupenyu hwako hwakabatikana hwehupenyu uye zvaunoda.
Zvirongwa zveboka zveBLI zvinopa chiitiko chakanakira kunze kwenyika kusanganisa kudzidza kweChirungu neyechiFrench pamwe nezvimwe zviitiko zvinonakidza munzvimbo yakachengeteka uye ine hanya.
YAKO YAKABUDA KUCADADAZvirongwa zvePathway
Ungave unoda kudzidza muCanada pachikoro chepasekondari uye semhedzisiro yavo kuti uve Mugari weCanada?
BLI inoita kuti maitiro aya ave nyore. BLI Canada ine zvibvumirano nehuwandu hukuru kana masisito ayo anopa post-sekondari dzidzo. Kana iwe ukatora iyo BLI nziraway chirongwa, iwe uchawana kudzidziswa kwaunoda kusvika padanho remutauro izvo zvinodikanwa kuti utange chirongwa chakadai, asi zvakanyanya kunyanya, iwe uchagadzirira kuzobudirira kana uchinge watanga zvidzidzo zvako zvekupedza sekondari.
Kutora BLI nziraway chirongwa kuchakubatsira iwe kuvandudza yako yekudzidza kuverenga uye kunyora hunyanzvi. Kupfuurirazve, iwe uchadzidza tsvagurudzo uye nhaurirano matekiniki ayo anozobatsira nekukurumidza iwe paunotanga zvidzidzo zvako kune imwe yezvikoro zvedu zvehukama.
Zvikoro zveduNYAYA DZIMWEWO AMAZING
Dzidza Chirungu kana chiFrench muCanada. Kana iwe uchida kudzidza French unogona kusarudza pakati pedu mutauro Chikoro muMontreal uye yedu French chikoro muQuebec City. Kana iwe uchida kudzidza Chirungu, BLI Montreal yakamirira iwe
Iwe une mibvunzo
[Contact-fomu-7 404 "Yashaikwa"]
© 2020 BLi Canada. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.